BIYYALAATTIS NU QOCHISIIFACHUU FEDHUU? - Welcome to bilisummaa
BIYYALAATTIS NU QOCHISIIFACHUU FEDHUU?
HUBACHIISA: yaa dubbiftoota walaloo kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, inni amma isiniif dhiyaate kun waggaa kurnan harraa, gaafa 28. 06. 2004 mandhe ONA irratti baafamee ture. Ennaa san nafxanyoonni fi ilmaan isaanii kanneen magaalmataa biyya USA-a, Waashingitan Diisii fi naannoo isaa jiraatan, akka “Raadiyoon Sagalee Ameerikaa, VOA“n) Afaan Oromootiin hin dabarsineef, akka sa’aan hin dabalamneef faa hiriira bayuun dura-dhaabatan san walaleeffame. Jarreen kun kunoo amma waggaalee 10 boodas numatti ka’aati jiru. Kunoo, bardheengaddaa irraa kaasee dhibeen isaanii inni, uummata Oromoo jibbisuu fi saba Oromoo irratti isaan kakaasu sirumaa itti-hammaachaa jira. Minilikoonni bardhibbee 21-ffaa kun alaa-manaa nutti duulaa jiru. Gita-bittee Tigraay, kan Wayyaanee jedhamu cinaa goruun qonnaan-bultoota Oromoo qeyee fi araddaa isaa irra buqqisaa jiru. Oobruu fi caffee Oromiyaa kaan summeessaa, kaan onsaa, kaan Oromoota buqqisanii manneen irratti ijaarrachaa jiru. Dabrees uummatoota Kibbaa: Gambeellaa, Beenishaangul, Somaalota Ogaadeniyaa, uummatoota Sulula Laga Omoo faa akkuma qonnaan-bulaa Oromootti qawwee fi tiraaktaraan buqqisaa, buqqisiisaa jiru.
Kunoo, ijuma teenya duratti barri Minilik faashistichaa sun deebiyaa, uummanni keenya fi uummanni Kibbaa buqqifamaa, awwaallan abbootii fi haadholii isaa wajjin gurguramaa jira. Harra akka durii, akka hoolotaatti gabaa dhaabanii nu gurgurachuu daddhabnaan, lafa lafee keenya tahe irraa nu buqqisanii ittiin-daldalchaa, warreen akka isaanii warra baargamaatti gurgurachaa jiru. Siidaawwan Minilik qeyee fi gandeen keenya keessatti akka ijaarruuf nu abboomaa jiru. Uummata Oromoo isa naannoo Finfinnee Shaggar, isa buqqifama Minilik irraa mimmilqee hafe san amma lafarraa-duguugaa jiru. Bakka aadaa fi Afaan Oromoo, aadaa Amaaraa fi Afaan Amaaraa isa qawween nutti dhufe kana buusaa jiru. Afaan isaanii kana, akka waan afaan addunyaalessaa taheetti nutti gurgurachuuf aggamu. Oromiyaa keena keessatti afaan biyyaa, Afaan Oromooti. Namni barabaraan achi jiraatu isa barachuu qaba. Namoonni Oromoo mootummaa jiddu-galeessaa keessattis, paarlamaa Toopphiyaa keessattis, manneen seeraa fi manneen baankii Toopphiyaa isaan Oromiyaa keessa jiran keessattis, Finfinnee mataa ishii keessattis Afaan Oromootiin hojjachuu qabu. Nuti Oromiyaa keessatti Afaan Oromootiin baranna. Dhugaa dha; Afaan Ingiliziis akkuma duriitti baranna. Gaafa Gondor faa, naannoo Manjii faa dhaqinee barabaraan jiraachuu barbaanne callaa Afaan Amaaraa baranna. Garuu, nuti wanni Biyya Amaaraa nu geessu sababni tokkollee hin argamu.
Yaa Oromoo koo, isin harra mandhee Oromiyaa isa: “gadaa.com” jedhamu irratti, waayee ijoollee teenyaa isaan Unibarsiitii Wallaggaa irraa hiriira nagaa, nagaan bayanii warra nagaa hin beeknee fi nagaa hin taaneen reebaman arguun keessan hin oolu. Mucayyoo foolisoota Wayyaneetiin reebamtee, funyaan ishii faa madayee san agartanii jirtu. Mee maaltu isinitti dhagayame? Yaa uummata koo, egaa hamma yoomiitti Habashoota qawween biyya keenya seenan kanaan reebamaa, hidhamaa, waxalamaa, garafamaa, ajjeefamneeyyuu Gaara Suufii faatti waraabessaan nyaatamaa jiraanna? Abboo gayeen gayee dhaa, waltaanee, karaa maraan hidhannee ol haa kaanu! Kunoo, Dhaloonni Qubee hamma harraatti unibarsiitota shan: Unbarsiitii Jimmaa, Unibarsiitii Mattuu, Unibarsiitii Wallaggaa, Unibarsiitii Amboo fi Unibarsiitii Haramaayaa irraa hiriiraaf gayaa’anii jiru. Isaan kaanis akka isaan duukaa-bu’an ni beekama. Dabreeyyuu barattoonni Oromiyaa guutuu, isaan manneen barumsaa Oliyyalee (“secondary schools“) irraas, akka fakkeenya hangafoota isaanii faaneffatan ni eegama. Egaa, warri qawween biyya keenya seenee nagaa nu dhoowwuun nu unkuru kun akka nagaan hin teenya, nagaan rafee hin bulle innumtuu ni beeka, Nagaa booressani nagaan jiraachuun eessumayyuu hin jiru. Leencota madeessanii, qeyee qeerransootaa bubuqqisanii taa’uun yoom jiraree? Mee waan hundaafuu, walaloon kiyya kun barattoota Oromoo diina uummata Oromootiin madeeffan, reebaman, hidhamanii fi daggala keessatti dhokataniif: raajefannoo, biradhaabannoo, jajjabeessii fi mararfannoo haa tahuufi!
________________________________________ // _________________________________________
28. 06. 04
Raajii dha, raajii dha
Fardatu baajii dha
Gaangeen gaafa baaftee
Re’een foon albaaftee
Kan baranaa raajii dhaa
Ijji maal na argaa
Fardatu baajii dhaa?
Duubatti kan deebi’e anaa
Duubatti kan deebi’e baraa
Duubatti kan deebi’e jaraa?
Barri kun isa kami
Jarri kun isaan kami?
Bara Raas Daargetii?
Ani nan wallaalee?
Saayinsiitu na takaalee?
Nattimi yaa beekaa
Kurfaayeen si eegaa?
Nu qochisiifachuu fedhuu?
Egaa asittoo qawween,
Harkan jirruu maal ta’uu?
Harki taa’uu bare hin qotuu
Sammuun gabroome hin loluu
Harki qotuu jibbe
Isa qotu tuffataa
Sammuun loluu dide
Isa lolu arrabsaa!
Harki hojii jibbe reeffaa
Sammuun tuffii barees reeffaa
Maarree reeffa du’ee dubbatuu
Harka isaa laate dhiisee
Harma isa! hoosisee dhiisee
Sheexana-faa kan dhungatuu!
Nu lolchisiifachuu fedhuu
Ammas Ogaadeen dhaqaa
Ertiraatti achol ba’aa
Haadha teessaniif mitii
Tan teenyaaf du’aa jedhuu!
Erga haadha ofii jaalatanii
Erga Tooppphaan dhaadatanii
Maan duuneree dhaqanii
Yoo haqa qabaatanii?
Isaanis haadha qabuu
Nutisoo haadha qabnaa
Haawweeen lameen addaddaa
Kan ta’an gaangee fi fardaa!
Yoo du’aa du’aan dhufe
Gabrummaan itti fufee
Nu haayyoo teenyaf duuna
Harcaanee gadi buuna!
Ammoo otoo harcaaneen bu’in
Ilaa otoo lafarraan dhumin:
Waliso Roggee Ammayya
Jibbaat keessi bosonaa
Qeerransa keessa sonaa
Dalloo keessi daggalaa
Leencatoo itti galaa
Carcar keessi hurrumaa
Gibee keessi limixaa
Kan gameef achi lixaa
Mogor keessi shimalaa
Birmaduuf achi malaa
Achittoo deemnee duuna
Yoo duune haayyoo ergisaaf mitii
Seenaa isa sobaatiif mitii
Haadha nu deesseef duuna
Seenaa dhugaa gaffuuna!
Biyyalaattis nu sirbisiifachuu fedhuu?
Gaayila keenya irrattillee
Keenyawoo isiniif jira jedhuu
Ragada haadha “reggae” hin sirbinaa nuun jedhu
Jamaayikaas dhaqanii dhoowwuu fedhuu?
Beneensummaa mootummoota saanii
Gara-jabeessummaa gita-bittee sa! anii
Garaa waaqaa jala faffacaanee
Kunoo oliifii-gad tatamsaanee
Biyya raajii-raagaan keenya
Maqaa-saallee hin beekne
Takkaayyuu hin dhageenye
Humma Somaaliyaa lukaan murree
Bosona Sudaan qaxxaamurree
Kaan irbaata leencaa
Kaan dhiyaana hummaa
Ta’ee nu biraa achitti hafee
Kaan akka sheek Saphaaloo
Akkas otoo dhaadatuu
Biyya ofii waammatuu
Biyyee amabaa keessa rafee
ijoolleen hummatti dhalattee
Ishiin kaan caakkaatti guddattee
“Karaa“, “Karee” jedhamtee moggaafamtee
Hammachiisaa Amboo mitii
Harsadii Bishooftuu mitii
Amma kunoo shororkeessituu jedhamtee!
Seenaan keenya dhiigaan kitaabamee
Seenaa hortee Kuushii
Seenaa hortee Afrikaa
Qaccee fara’oonotaa jedhamee!
Nuti biyya saaniit! tin duullee
Biyyum keenya dhufanii
Gandeen teenya gubanii
Baar gamatti gurguranii!
Kan Omaan-Iraaq geeffame hin deebinee
Kan Jamaayikaa-Teeksaas geeffame
Seenaa-saallee hin arginee
Kan Jarman dhufe hin gallee
Akkafe’ee, Aagaa, Bililleen-faa
Boolla cabbii keessaa ammallee:
Yaa harmee-to o
Ilmoo gabra durii hundaa
Hortee Kuush-Afrikaa hundaa
Kunoo akkan garaa nyaatuu!
Bar gateettiin abbootii keenyaa
Kan waanjoon madeesse hin fayyinee
Dugdi haayyolee teenyaa
Kan ba’aan jajallise hin qajeellee!
Harmi haayyolee Aannolee
Harki aabbolee Aannolee
Boolla keessaa dubbataa
Hortee Kuush-Afrikaatti iyyataa!
Bar nu seenaa Afrikaa malee
Eekaa seenaa Kuushotaa malee
Seenaa ergisaa homaa hin qabnuu
Mootii Afrikaa Shaakaa malee
Kan Solomoon jedhan barbaachan dhaqnuu!
Qacceen teenya Afrikumaa
Kana qaroominni keenya
Kana ayaan teenya!
Himachuu daddhabne malee
Hin hukkaamamne malee
Aksum kunu! u kan keenyaa
Agawo diroon Laalli balaa
Duguugamee maal himnaa?
Maqaa jibbaa nutti babbaasanii
Arrabsoo barabaraan yayyaasanii:
Walaamoo fi Gudeellaa
Gaallaa fi Shaanqillaa
Guraagee kulii kulii
Adareen tunii tunii
Jedhanii arrabsoo Kilimaanjaroo fakkeessanii
Dhugaa dhara-dharaan addeessanii!
Bar Gaallaa jechuun “Nigger“-ii
Bar Shaanqillaa jechuun “slave“-ii
Lachuu gabra jechuu-dhaa
Ilmoo namaa horii godhee hudhaa
Afaan keenya keessallee
Sagaleen “gabra” jedhamun turree
Afaanuma-saanii Gi’iisii-rraa as-furree!
Bar nuti warri isaan akkan godhan kun
Uummatoonni isaan gaddhiitan kun
Biyya-saanii hin dhaqnee
Abbayya achiin ceenee
Biyyoota keenya dhufanii
Gandoota keenya gubanii
Namummaa keenya madeessanii
Aadaawwan keenya barbadeessanii
Afaanota keenya bubbusheessanii!
Bar nuti! saboonni Kuushii
Kan Oromi yaa fi Kibbaa
Manneen hidhaa isaan tarree:
Booda dirra garafame
Nafa isa waxalame
Sukkuumnee walii qoorsinee
Imimmaan dhiigaa waliif gogsinee
Bara dheeraa wajjin turree
Sansalata walirraa furree
Bittee-saanii hidduu qaxxaamurre!
Hayyee hayyee ijoollee Kuushiyaa
Hayyee hayyee jabbillee Oromiyaa
Nafni Gaambellaa nafa keenyaa
Dhiigni Benshaangul dhiiga keenyaa
Walitti haa iyyannu
Waliif haa birmannu!
Walaayitaan Kuush lixaatii
Kafichoonis Kuush lixaatii
“Omotic” jettanii maqaa lagaatiin hin waaminaa
Namas lafas kiristinnaa hin kaasinaa!
Ukkaamamnee iyyachuullee daddhabnee
Harki nu hidhamee isa kaaneef hanqannee
Addunyaan dibbee-saanii rukuttii
Haayyoon teenya Afrikaanillee
Soba-saanii fudhattee urguftii!
Kunoo sobni mootomee
Ilaa shororkeessituu jedhanii
Akka Teediroos isaanii
Akka Minilik isaanii
Gargaarsa ammas gamaa kadhatuu
Shorokeessituu maaf hin-hiine jedhuu
Karchallee gara Diisii fiduu fe’uu?
Kunoo sobni-saanii farda koree
Addunyaa keessa garmaamaa
Balali’aatoo dhabamee ma! lee
Ji’arra olbawuuf wal-waamaa!
Appartaayidi-llee sirni bineensummaa
Naqarsi diinni ilmoo namaa
Maandellaa leenchicha Afrikaa
Mandhee keessatti hidhee teessisee
Ginni bittee Habashaa
Barsiisaa-saa Taaddoo Birruu
Hudhee boolla seensisee!
Hayyee ijoollee Kuushiyaa
Hayyee jabbilee Oromiyaa
Isaan jibba dhugaa guddatanii
Aannanii-damma keenyaan akkan furdatanii
Jibbatu moora ijaa-saanii cufee
Bara Teediroos kaasee itti fufee!
Nuti ijoolleen Oromoo jibba
Luugaa hin guddannee
Tuffii sanyii namaatiin hin furdannee:
Aadaan keenya aadaa gadaa-tii
Jibba hin faffacaasuu
Afaan keenya afaan abbaa gadaa-tii
Oftuulummaa hin tatamsaasuu
Amantiin keenya Waaqeffannaa-dhaa
Ilmoo namaa gurguruun laguu-dhaa
Uumaa WAAQA gurraachaa
Nuti ammas jibba hin hafarsinuu
Wallaalummaa hin labsinuu
Sanyiin hunduu qixxee-dhaa
Afaan hunduu qixxee-dhaa
Kanaaf sonaan miidhagduu-dhaa!
Asxaan walaabummaa dubartii siiqqee
Ateetiyyoon haadha maraaf qixxee
Coqorsi, ejersi-faa lubbuu qabuu
Massaa malee hin ciramanii
Oromiyaan jiituu bosonaa turitee
Daggala bunaa gobbuu
Caakkaa mukaa yabbuu
Sheexannillee qawwee duukaa gaddhufee
Caakkaa gubuu, aadaa gu buu itti-fufee!
Dhaloota boruuttin dabarsinuu
Dugda gadin cabsinuu
Roorrootti harka hin laannuu
Akka du’aatii hin hafuu
Hammasittis garaan keenya
Homaa hin raffuu
Ollummaa boruutiif qopphoofnaa
Saba waanjoon gad-qabame
Warra namummaan itti dhagayame
Hundaattuu namummaaf iyyannaa!
Namummaa-saanii hin tuqinaa
Garuu harqoota gabrummaa-saanii
Caccabsuu irraa hin deebi’naa
Gabraan daldaltuu fi uummata-saanii
Firummaa uummatootaa eessattuu
Biyya keessatti kan isaanii baatu
Addunyaa irrattis kan isaanii kaatu
Bara-baraan kan isaanii laatu
Manneen hidhaallee kan isaanii jaaru
Sharafa alaa kan isaanii argamsiisu
Callaa ofiitiin kan isaan barsiisu
Siree tolchee kan isaan raffisu
Warra Mosolonii-llee kan irraa har’e
Otoo mee hojiitii silaa yoona nuuf bari’ee!
Nuti ijoolleen Kuush Toopphiyaa keessaa
Akkuma abbootii Martin-Luther King-ii
Gabroota manaa fi gabroota alaa turree
Hammallee sansalatatu geeddaramee malee
Roorrisaan homaa nuttiin furree
Egaa amma ka’a harka walqabaddhaa
Gabrummaa jalaa bawuuf kakaddhaa
Isaan kun alaa nutti ka’uu
Isaan sun manaa nutti alb—-
Harra Shaggar irraa nu hari’anii
Handhuura keenyarraa nu kaasanii
Boru Jimma-rraa n! u hari’uu
Iftaan gobba-rraa nu ka asuu
Buqqisiin akkanum jedhee itti fufaa
Rooroon ija baasee Oromiyaa teenya cufaa!
Kaleessa ilmaan Agawoo Kuushii
Gabaa hoolotaa isa Kolfee Shaggarii mitii
Gabaa Yarusaalem dhaabee gurguratee
Horoo sanaan allaattii sibiilaa bitatee
Ertiraa fi Oromootti summii garroobsee
Mucha dinagdee biyyaas doomsee!
Eekaa gita bittee Israa’el
Isa bulguutti of jijjiiree
Majaa sibiilaas fudhatee
Nu duuguuf kakatee!
Bar Falastiinaanis numaa
Dhiigni saba miidhamee
Foon uummata cunqurfamee
Hayyee jabbillee Oromiyaa
Hayyee ijjoollee warra Kibbaa
Jarri hudhee nu jibbaa
Mee isin wal-marafaddhaa
Obbolummaa Taaddoo Birruu faa buusan
Isa dur diroon Xoonaa faa nuuf kuusan
Gagabbisaa cimsaa, jabeessatii tiksaa
Sansalata gabrummaa walirraa ciraa harkisaa
Impaayerittiin tun Karchallee-dhaa
Caccabsaa keessaa ba’aa
Galma bilisummaa keessan ga’aa!
Barliin, Amajjii 2004
************* // **************
Previous Baratooti oromoo hedduun hadha pooliisii federaalaan reebamanii jiru.
Next Diddaa dhimma Finfinnee ilaalchise gorsa tarsiimoo jawaar muhaammad irraa barattoota yuniversitiif